October 19, 2021 - Babal Khabar
Oct192021 by बबाल खबरNo Comments
पहिले हेर्नुस यो भिडियो, आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घट’ना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसिपार्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवन मा खटपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित लेखेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमती लाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू यी सुत्र हरु अपनाउनुभयो भने तपाइको परिवारमा कहिले पनि झगडा हुदैन । १. काली, परी, माया, बेबी र मेरो महारानी भनेर बोलाउने । २.कुनै अन्य राम्री केटी संग तुलना गर्दै नगर्ने। बरु नराम्री केटीको फ़ोटो देखाएर यो भन्दा राम्री त तिमी छौ भनी मक्ख पार्ने। ३. भूलेर पनी श्रीमतीका बाउआमाको नराम्रो पक्ष ननिकाल्दिने। सकेसम्म माईतीको कुकुर र भैसिको पनी भरपूर तारीफ गर्ने। ४.घर सफा, गर्ने, कपड़ा धुने, बजार जाने र खाना पकाउने। अफिसको लागी आफ्नो खाजा आफै पोको पार्ने। ५. बाहिर निस्कदा आफ्नो गन्तव्य सुनाएर निस्कने र
हेर्नुस यो भिडियो, हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन। त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण एस्तो छ हेर्नुहोस । हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । १.सुरक्षित : केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । खासमा पाको उमेरका पुरुषसँग उनीहरुलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन
हेर्नुस यो भिडियो, बिभिन्न बैज्ञानिक अध्ययनले मात्र होइन, विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ । विष्णु पुराणमा भूगोल, कर्मका’ण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ । निरोगी तथा राम्रो बनिराख्नका लागि हरेक दिन विहान नुहाउनुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ । विहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला ताराहरुको छाया हेर्दै नुहाएमा अलक्ष्मी, समस्या र नरा’म्रो शक्ति न’ष्ट भएर जान्छ । नुहाउने समयमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लोकहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्ष’य पुण्यको लाभ हुन्छ ।तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हा’नी हुन्छ । जीवनशैलीमा निन्द्रा राम्रो लिन आवश्यक छ । हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउन आवश्यक हुन्छ । यदि राम्रो निन्द्रा पुगेन भने
हेर्नुस यो भिडियो, यौ,न स’म्प’र्कको बेला म’हिलाहरु आँ’खा चि’म्लने गर्दछन् । पुरु;षहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महि’लाहरु किन आँ’खा च’म्ल,न्छन् ? कतिपयले आँ,खा ब,न्द नगर्न सक्छ । यदि आँ,खा ब,न्द गर्दैन भने केही न केही यौ,न सम.,स्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौ,न स,म्’र्कको क्र,ममा महि,लाले आँ,खा चि,म्ल,नैपर्छ ? किन उनीहरु आँ,खा चि,म्ल,न्छन् ? के छ यसको कारण ? एक शोधका अनुसार जसै हा,च्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कु,नै नि’न्त्रण हुँदैन । हा,च्छ्यु,, गरिरहँदा हाम्रो आँ,खा ब,न्द हुन्छ, यो स्व,त.,स्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौ,नमा चर,मसु,खको बेला आँ,खा खो,ल्न स,क्दैनन् । खास,गरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्या.,न्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँ,खा ब,न्द गर्नका लागि स,न्देश पठाउँछ । एक सर्वे अनुसार कुनै महि,ला यदि यौ,न स,.म्प,र्कका क्रममा आँ,खा
हेर्नुस यो भिडियो, मेरो श्रीमान् माल्दिभ्समा हुनुहुन्छ । उहाँलाई वि’दाइ गर्दा मैले घर व्य’वहार म मिलाउँछु चिन्ता नर्गनु भनेको थिएँ । स’म्बन्ध भनेको विश्वास त हो नि उहाँ लाई मैले घर सम्हाल्छु भनेर विश्वास दिलाएर पठाएँ पछि त मैले आफ्नो जि’म्मेवारी पूरा गर्नै पर्‍यो । घर व्यवहार राम्रोसँग चलाउने तरिका नजान्दासम्म सजिलो चाहिँ हुदो रहेनछ । श्रीमानले विदेशमा कमाएको त जोगाउन पर्छ भन्ने भएपनि जोगाउने तरि’का नजान्दा भने जस्तो भएको थिएन । चार महिना अघि गाउँमा विदेशमा हुनेका परिवार लाई वित्तीय सा’क्षरताका कक्षा स’ञ्चालन हुने भयो । कक्षामा आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनका साथै विभिन्न व्यव हारिक ज्ञान सिकाइन्छ भन्ने कुरा सुनें ।त्यसपछि म पनि यो कक्षामा बसें । यो कक्षामा बसेपछि मैले आ’म्दानी के हो र ख’र्च के हो भन्ने कुरा बुझें । आम्दानी र ख’र्चलाई व्यवस्थापन गरेर कसरी बचत गर्ने भन्ने कु